မြန်မာပြည်တိုးတက်မှု တည်မြဲပါစေ (TheStraitsTimes- ဘာသာပြန်) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဒီပဲယင်း တရားခံ ဦးအောင်သောင်းရဲ့ စံအိမ်တော်အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း….
A collection of good links chosen by Dr. Zarni »
”အကြင်နာကင်းမဲ့၍ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော အကွက်ကျကျ၊ စနစ်တကျ စွမ်းအားမြင့် အစွမ်းကုန်တိုက်ခိုက်မှု” ”brutal efficiency” ဟူသော စကားလုံးကိုရွေးချယ် အသုံးပြု၍ဖော်ပြသွားခဲ့သည်။ အလွန်ပင် ထိရောက်လှသော စကားလုံးရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့သော လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ရပ်ကြားရှိပဋိပက္ခများသည် မြန်မာပြည်အတွင်းအမြစ်တွယ်လျက်ရှိလေသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း ၁၃၅မျိုး ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည့် ၁၉၄၈ခုနှစ် ကတည်းကစတင်ကာ ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ် ခံနေရသည်။ အများစုက ဗမာ လူမျိုးများဖြစ်ကြသည့် စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာပင် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတို့အား လူ့အဖွဲ့အစည်းအသိုင်းအဝိုင်းမှ နှိမ်ချကာ တစ်ဆင့်နိမ့်နိုင်ငံသား အဖြစ်သတ်မှတ်လျက် “တိုင်းရင်းသား သန့်စင်ရေး” လုပ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။
မြန်မာပြည်အနောက်ပိုင်းတွင် ထိုပဋိပက္ခ ဖြစ်ခဲ့စဉ်မှစကာ မွတ်စလင်မ်ဆန့်ကျင်သူ အစွန်းရောက်များက နိုင်ငံတစ်ဝန်း သွားကာ မွတ်စလင်မ်မကောင်းကြောင်း လှည့်လည်ဟောပြောခြင်း၊ “တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုး ကာကွယ်ရမည့်အကြောင်း” တရားဟော အသံသွင်း ရိုက်ကူးဖြန့်ဝေခြင်း၊ မွတ်စလင်မ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား သပိတ်မှောက် ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် အားမပေးရန် စတစ်ကာများ ဝေငှခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်လာကြသည်။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် လောလောလတ်လတ်ပြုထားသည်ကို အခွင့်ကောင်းယူကာ “မွတ်စင်မ်များက စီးပွားရေး လက်ဝါးကြီးအုပ်ကြသည်၊ မွတ်စလင်မ်များက အမျိုးသမီးတို့အား အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ သွတ်သွင်းနေကြသည်” စသည်ဖြင့် ဝါဒဖြန့်ကြသည်။
မိတ္ထီလာတွင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူအုပ်စုက မွတ်စလင်မ်တို့အား တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်နေသည်ကို ရဲများက လက်ပိုက်ကြည့်နေကြကြောင်း သတင်းများ ကြားသိတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ရဲအချို့က ဂျာနယ်များတွင် ပြောကြားဖော်ပြခဲ့သည်က “သူတို့အားရှောင်နေကြရန်၊ ဝင်မပါကြရန် အမိန့်ပေးထားသည်” တဲ့။
အမေရိကန်သမ္မတကြီး ဘာရက်အိုဘားမား ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလက လာရောက်ခဲ့ခြင်းအပါအဝင် နိုင်ငံခြားခေါင်းဆောင်များ နှင့် နိုင်ငံခြား ခရီးသွားများ ခြေခြင်းလိမ် မတတ် မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်လေ့လာနေစဉ် ကာလတွင် နိုင်ငံ့ကောင်းကျိုးကိုမျှော်ကိုးလျက် “အုပ်စုမတူသူကို မနှစ်သက်၍ ဖယ်ကြဉ်” တတ်သည့် အကျင့်ဆိုးကို ဖယ်ရှားသင့်ပါပြီ။ ၂၀၁၅တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဦးမည်ဖြစ်ရာ နောက်ကြောင်းပြန်လိုသူ အပြောင်းအလဲ မလိုလားသူ ခေါင်းမာသူများနှင့် ယခင်စစ်အာဏာရှင်များက ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ဤကာလအတွင်း ပဋိပက္ခများ စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင့် ကျရမှုများ ဖန်တီးကာ စစ်အာဏာ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန် သိမ်းရန် အသုံးချနိုင်ပါသည်။ မြန်မာပြည်ကြီး အမိုက်မှောင်ခေတ် နောက်တစ်ခါ ပြန်အရောက် မခံနိုင်တော့ပါ။
This entry was posted on April 23, 2013 at 11:09 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.